Su'aalaha la isweydiiyo - Changzhou Hollysen Technology Trading Co., Ltd.
Miyaad siin kartaa shaybaarka qofka kaa masuulka ah?
Haa, waan awoodnaa Waxaan ku siin karnaa saamiga kaydka ah. Macaamilkuna waa inuu iska bixiyaa kharashka muunadda iyo sarkaalka.
Sidee baad u dammaanad qaadaysaa tayada alaabtaada?
Waxaan leenahay sheybaar u gaar ah oo dhammaan alaabada 100% baaro kahor dhalmada. Dhammaan habsocodyadeennu waxay si adag u hoggaansamaan hababka IATF16949. Jid ahaan, waxaan haysannaa dammaanad 1 sano ah laga bilaabo taariikhda soosaarka BL haddii aad u isticmaasho badeecadeena si habboon.
Miyaad bixin kartaa adeeg habayn ah?
Haa, haddii aadan ka heli karin badeecadaha aad u baahan tahay qaybteenna, waxaad noo soo diri kartaa shuruudahaaga, kooxdayada xirfadleyda ah ee R&D ayaa si gaar ah adiga kuu qaabeyn doona kombiyuutarka ac.
Ka warran waqtiga dhalmadaada?
Waqtiga ugu dhaqsaha badan ee gaarsiinta waa 10 maalmood celceliska waqtiga dhalmadu waa 30 maalmood kadib markaad xaqiijisay.
Waa maxay shuruudahaaga gaarsiinta?
Maxaan sameeyaa haddii amarkaygu uusan waligiis imaan?
Hubi in dhammaan amaradaadii hore u rarteen. Haddii amarkaagu ku muujiyo xirmadaada mareegaha raadraaca ayaa la diray, oo aadan ku helin 2 toddobaad gudahood; fadlan la xiriir adeegga macmiilka si aad u hesho caawimaad.
Sideen ula socon karaa dalabkayga?
Waxaad ka hubin kartaa heerka dalabkaaga waqti kasta adiga oo toos u aadi doona xiriirrada ay bixiso adeeggayaga macmiilka iimayl ahaan. Fadlan ogow inaad haysato lambarka dalabka iyo cinwaanka emaylka si aad ula socoto xaaladda dalabka. Waxaan email kuugu soo diri doonnaa lambarka raadraaca. Fadlan la soco in mareegaha sidda laga yaabo inuusan cusboonaysiinin diiwaannada iyo heerka bakhtiga.
Dhammaan alaabtaadu ma ku jiraan kayd?
Guud ahaan marka la hadlayo, dhammaan alaabtayada ku qoran mareegaha ayaa la heli karaa. Laakiin marmarka qaarkood waxyaabaha qaarkood ayaa laga yaabaa inay yihiin kuwo aan nidaamsanayn baahida baahsan awgeed. Haddii aad soo qaadato shay oo aad iska bixiso, laakiin sabab kasta ha noqotee lama heli karo, waxaan kula soo xiriiri doonnaa sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, ama waxaan kuu soo jeedin doonnaa inaad dooratid shayga kale ee la midka ah ama ka baaraandegidda si dhakhso leh loogu soo celiyo koontadaada.